आशीर्वादमा पनि किन ‘ग्रेडिङ’ र दर्जा? हेर्नुस – Rapti Khabar
विवाहको पहिलो वर्ष, नयाँपन अनि कौतुहलता मिश्रित अनुभव। हुन त ‘कोरोना जोडी’, ‘लकडाउन हनिमुन’ भनेर साथीभाइको व्यंगात्मक जोक सामान्य भइसक्यो आजभोलि। २०७५ साल चैत १० गते अगाडि विवाहित थुप्रै जोडीले पचाएको ‘युनिभर्सल’ मजाक हुनुपर्छ यो। अनि यही वर्ष बिहे भएका जोडीले मात्र भोगेका तिता मिठा अनुभव।
यसै क्रममा घरको आँगन मात्र टेकेकी थिएँ, पल्लो घरको दिदी साख्खै पल्टिँदै बोलिन्, ‘नयाँ बुहारी बल्ल देख्न पाइयो। लकडाउनका बेला सबै सहरकाहरू घर आए तिमरुको बल्ल दर्शन पाइयो।’
घर छिर्न नपाउँदै एक हुल जिज्ञासा थियो उनको आँखामा। ‘अनि बेला यस्तो छ माइ तजाने कि नजाने?’ फेरि एउटा प्रश्न तेर्स्याइन्।
आफू जन्मे-हुर्केको घर, म जाऊँ-नजाऊँ, मेरो कुरा। फेरि समय जस्तो भए पनि ‘इज्जत धान्न’ घर आएकै छु भन्न मन त थियो। तर पनि प्रतिक्रिया बिहिन भएर मुसुक्क हाँसेँ।
प्रायः नचिनेको मान्छेलाई झट्ट प्रतिक्रिया दिन्नँ म। फेरि पहिलो पल्ट चाडवाड मनाउन नयाँ घर गएको छुट्टै उत्साह थियो। भन्न त मन थियो उनलाई ‘वर्क फ्रम होम’ अर्थात् घरैबाट काम हुने भएकाले पहिलेभन्दा बढी दोहोरो (घरको र अफिसको कामको) धपेडीमा छु भनेर। तर हाम्रो जस्तो समाजमा त्यसको कति औचित्य र अर्थ रहला भनेर मौन रहेँ।
‘जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमोस्तुते।
‘दुर्गा भवानीले रक्षा गरून्, अर्को वर्ष तीन जनालाई टीको लाउन पाइयोस्’ घरका सबैले मुस्कुराउँदै दिएको त्यो आशिषले मलाई भने पोलिरह्यो मनमनै।
बिहे गरेको पहिलो महिनादेखि ‘बच्चा बस्यो कि बसेन, मैले कुनै गर्भनिरोध साधन पो प्रयोग गरेँ कि? फेरि पहिलो पालो केही विधि अपनाए पछि बच्चा बस्न समस्या हुन्छ अनि हाम्रो हातखुटा बलियो छँदा सन्तान जन्माई हाल, सजिलो हुन्छ’ भन्ने दैनिक सुझावहरूले मलाई झर्को लाग्न थालिसकेको थियो।
हुदाँहुदाँ अरु वर्ष सधैं खान मिल्ने देवीको प्रसाद यो वर्ष अरु गोत्रमा गएका कारण खान पाइनँ। कुरा प्रसादको मात्र हुँदो हो भने खास फरक पर्थेन। कुरा म जन्मे-हुर्केको घरमा मेरो स्थानको थियो जुन बिहे भएको केही महिनामै खस्किँदै थियो। ‘आइडेन्टिटी क्राइसिस’ भइरहेथ्यो ममा।
आशीर्वाद थाप्नै धाएर गएकाले टीका लाउन बसियो। आमाले आफूलाई नआउने मन्त्र पनि ज्वाइँकै लागि युट्युबबाट कण्ठ पार्नुभएको रहेछ। दियो, कलश, गणेश, थापेर देवी, भगवतीको प्रसाद लगाइदिँदै आमाले मन्त्र उच्चारण गर्नुभयो, ‘आयु द्रोण सुते श्रीयं दशरथे। शत्रु क्षयम् राघवे। ऐश्वर्य नहुषे गतिश्च पवने मानं च दुर्योधने। सौर्य सान्तन्वे बलं हलधरे सत्यम् च कुन्ति सुते। विज्ञानं बिदुरे भवतु भवतं कृतिश्च नारायणे… मनले चिताएको सबै कुरा पुगोस्।’
घरमा एक्कासि ‘ए ग्रेड’ को आशीर्वाद सुनेर म दंग परेँ। अरू वर्ष हामीले पाउने आशीर्वाद भनेको धेरै पढ्नू, ज्ञानी हुनू, मुखमुखै नलाग्नू, भनेको मान्नू हो।
मनमनै एक हिसाबले डाह लाग्यो। मलाई अथवा कुनै पनि छोरी मान्छेलाई किन मान-सम्मान मिश्रित आशीर्वादबाट ‘बाइपास’ गरिएको होला?
त्यही सौभाग्यको चक्रब्यूहमा छोरी मरोस् भन्ने आशिष दिँदैछन् जानी, नजानी। हुन त छोरी अन्माउने बेला आफैंले जन्माएको छोरी अरूलाई सुम्पिँदा ‘मारे पाप, पाले पुण्य’ भनिने हाम्रो संस्कारको अगाडि म र मजस्ता छोरीको दर्जा र आशीर्वादको स्तर सजिलै झल्काउँछ।
किन म र मजस्ता छोरीहरूलाई वर्ष दिनमा पाइने आशिष बिझाउँछ? भलो होस् भनेर शक्तिस्वरुप माता दुर्गा साक्षी राखी दिइएको आशीर्वादमा पनि किन ‘ग्रेडिङ’, दर्जा र भिन्नता? -सेतोपाटीबाट